Obodo kacha mma na nso Berlin | Akụkọ njem
Berlin Ọ bụ isi obodo Germany na otu n'ime obodo ndị njem nlegharị anya mgbe ị na-eleta Europe. Ihe karịrị afọ 70 agafeela kemgbe njedebe nke Agha Ụwa nke Abụọ na ihe dị ka 30 kemgbe ọdịda nke mgbidi Berlin, ma ọ dịghị onye na-enwe obi abụọ na ọ bụ na ọ ga-anọgide na-abụ obodo na-adọrọ mmasị ileta.
Ma na gburugburu Berlin, olee ihe ọzọ anyị nwere ike ime? Germany abụghị nnukwu obodo, yabụ na anyị nwere ebe dị anya ebe kacha mma maka njem ụbọchị ma ọ bụ ọpụpụ. Ka anyị hụ taa obodo kacha mma dị nso na Berlin.
8 Asụsụ Spandau
Obodo a bụ otu awa ma ọ bụ abụọ ụgbọala si Berlin na bụ obodo nke onye na-ede uri na onye edemede Thedoro Fontane. Ọ bụ obodo mara mma nke nwere mgbọrọgwụ Prussian, ọ bụghị ihe karịrị kilomita 60 n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke isi obodo German.
Ọ dị n'ikpere mmiri nke ọdọ mmiri mara mma ugwu ndị oké ọhịa gbara ya gburugburu. A na-akpọ ọdọ mmiri ahụ Ruppiner See na ebe nchekwa gbara ya gburugburu Ruppiner Schweiz. Ọ bụrụ na ị na-aga n'oge ọkọchị, ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu mmiri, ịkwọ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ịkwọ ụgbọ mmiri ma ọ bụ njem n'ala ma ọ bụ ịnya igwe.
Enwere ọbụna ụzọ kilomita 14 nke na-aga gburugburu ọdọ mmiri ahụ ma na-enye gị ohere ịmara ụsọ oké osimiri ya dum na ebe ezumike ya kacha ewu ewu, bụ obodo. Mark Brandenburg & Fontane Therme.
Ebe a bụ otu awa na ọkara ụgbọala si Berlin ma ọ bụrụ na-amasị gị ọdịdị ọ bara uru ya n'ihi na Ọ bụ ọnụ ụzọ ámá nke Spreewald Biosphere Reserve. Ọ bụ ebe a na-ewu ewu n'oge okpomọkụ na n'oge opupu ihe ubi, nke nwere oke ọhịa osisi pine ya na netwọk mmiri mara mma. Ị nwere ike ịga ije, ịnya igwe kwụ otu ebe, debanye aha maka njem nleta, enwere ụfọdụ awa abụọ na ndị ọzọ buru ibu, awa itoolu, gaa kayaking, gaa nyocha.
Ma ọ bụrụ na-amasị gị nke ukwuu, ọ ga-ekwe omume mgbe niile ịnọrọ abalị, n'ezie. Alọghachila na-ewetaghị ezigbo ọkọnọ nke ya gastronomic ọpụrụiche: pickles.
Obodo a ka amara nke ọma. Ọ bụ kpam kpam ogbunigwe nke Agha Ụwa nke Abụọ bibiri, laa azụ na 1945, ma e wughachiri ya na ihe nile ka bụ otu n'ime pearl ndị kasị mara mma na mba ahụ. E wughachila akụ ya niile: Enwere ụlọ ndị baroque, ụlọ ụka, ihe ncheta dị ka Opera House ...
Na Neustadt, nke n'agbanyeghị na aha ya na-egosi ọhụrụ tọrọ Altstadt, e nwere a dum hipster ife na oge a cafes, breweries, graffiti ... Ọ bụ n'ezie ebe a na-anọ a di na nwunye nke ụbọchị n'ihi na otu bụ nanị nnọọ nta.
rostok na-ele anya n'Oké Osimiri Baltic ma dị narị afọ asatọ. Ọ bụ ezigbo njem site na Berlin n'ihi na e nwere ụsọ oké osimiri, ikuku dị n'oké osimiri, ị nwere ike iri azụ ọhụrụ, enwere ọkụ mara mma na ụlọ ndị ọkụ azụ ochie na-enye ya akara mara mma.
Ije ije n'ime obodo a bụ nhọrọ kachasị mma, na-efunahụ n'okporo ámá ndị dị warara, na-agbada n'ụsọ osimiri ma na-ete ụkwụ gị n'ájá na mmiri, na-eri ihe na nnukwu square ma na-atụgharị uche n'ụlọ ndị mara mma nke bụbu ndị ahịa: ha. bụ ụlọ brik na-acha uhie uhie na ụdị Renaissance nke ga-emeri ọtụtụ foto.
Ụlọ ụka Gothic Marienkirche bụ pearl ọzọ, ma ọ bụrụ na-amasị gị obodo, ị nwere ike ịnọ abalị na ọmarịcha ụlọ nkwari akụ Art Nouveau, Stadtperle Rostok.
A makwaara obodo a dị ka ebe ndị mmeri nke Agha Ụwa nke Abụọ zukọrọ ka ha kpebie ihe ga-eme mgbe agha ahụ gasịrị. Ọ bụ otu oge akpịrị ịkpọ nkụ nke ọchịchị Prussia na ndị eze o Ndị isi German, emesia ọ bụ a àkwà mmiri n'etiti East na West Germany na ebe ọ bụ na reunification nke mba bụ isi obodo nke steeti Brandenburg.
Potsdam nwere ogige ntụrụndụ na ubi, ọtụtụ ọmarịcha obí, n'etiti ha ndị kasị mma Sanssouci Palace, na ndepụta UNESCO, a onye bụbu ụlọ mkpọrọ KGB, nkeji iri na ise nke Dutch, ógbè Russia nke Alexandrowka na ihe owuwu ndị China mara mma ma dị egwu, Chinesisches Haús.
Potsdam erughị otu awa site na Berlin ma ị nwere ike were ahịrị ụgbọ oloko abụọ dịpụrụ adịpụ iji ruo ebe ahụ, S1 na S7.
Ntụgharị asụsụ ahụ ga-abụ «agwaetiti peacockMa ọ bụ obere agwaetiti nke ahụ bụ n'etiti osimiri Havel na nke ahụ, n'ụzọ doro anya, jupụtara na nnụnụ ndị a. N'àgwàetiti ahụ e nwere ụlọ ezumike nke eze Prussia Friedrich Whilhem II, ihe owuwu ụdị akụkọ ifo.
Ọ bụ ebe mara mma ịga n'oge ọkọchị nke edobere nke ọma maka ya kporie ndụ otu ụbọchị n'èzí yana picnic gụnyere. Ị nweghị ike ị smokingụ sịga ma ọ bụ ịnya igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ soro nkịta gaa n'ihi na agwaetiti ahụ niile bụ ebe echedoro.
Oleekwa otú ị ga-esi ruo ebe ahụ? Site na ọdụ Wannsee S-Bahn, ị ga-ebu ụgbọ ala 218 gaa n'osimiri ahụ wee banye ụgbọ mmiri nke na-efu ihe dị ka euro 4 iji gafee.
Ọ bụ ọdọ mmiri na nsọtụ oke ọhịa Grunewald. Ọ bụ ọdọ mmiri nke nwere mmiri dị jụụ, nke nwere ezigbo mmiri dị mma, dịka ọtụtụ ọdọ mmiri ndị dị n'akụkụ isi obodo Germany. n'oge okpomọkụ na mmiri mmadụ nwere ike ịbịa gwuo mmiri ma ọ bụ anwụ. A na-akwụ ụgwọ ụgbọ mmiri maka njem, a na-eji ubi ndị ahụ eme ihe na ị nwere ike ọbụna ịkụ azụ n'akụkụ ụfọdụ nke ọdọ mmiri ahụ.
Ọdọ mmiri ọ dị naanị ọkara elekere site na Berlin wee jiri ụgbọ oloko rutere, na-ewere ahịrị ime obodo S1, na tiketi ABC ama ama.
Ọ bụ ochie nnukwu ụlọ elu yabụ ọ bụrụ na-amasị gị akụkọ ihe mere eme, nke a dị mma! E wuru ya na narị afọ nke XNUMX na ọtụtụ n'ime ụlọ ya adịla ndụ ọtụtụ narị afọ n'ụzọ magburu onwe ya. Ọbụna mgbe Agha Ụwa nke Abụọ na ọtụtụ ọrụ.
Enwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ebe ị nwere ike ịmụta akụkọ ihe mere eme nke ebe na ubi ya mgbe niile ihe omume okpomọkụ dị ka ihe nkiri na ihe ndị ọzọ. E nwere elu 30 mita elu ụlọ elu, na Ụlọ elu Julius, nke ị nwere ike ịnụ ụtọ ụfọdụ Panoramic echiche pụrụiche ... n'agbanyeghị na o nwere puku kwuru puku ụsụ n'ime.
Enwere ike iru ụlọ elu site na metro, U7 bụ ahịrị na-aga ebe a. Gaa na U Zitadelle. Ị nwekwara ike iji ụgbọ ala na-ebu X33 site na Spandau S-Bahn ma nwee echiche ka mma. Spandau dị na mpaghara C yabụ ebe a ị ga-ejikwa tiketi ABC.
N'ikpeazụ, n'agbanyeghị na enwere ọtụtụ ebe enwere ike ịga, enwere Burg. Ebe a na-aga dị na ebe nchekwa Spreewald o nwekwara ụlọ ndị e ji osisi rụọ, ndị nwere elu ụlọ ndị mara mma, ndị na-agbago n’akụkụ ọwa mmiri ndị na-agafe n’obodo ahụ. Ọ mara mma n'ezie.
Ị nwere ike ịga njem, nọrọ ụbọchị ahụ, mara ụlọ ụka mara mma nke oge gboo, karịa ụlọ ụka uka, ma ọ bụrụ na-amasị gị ịga ije. Ị nwere ike ịrị 29 mita n'elu Bismarckturm na Schlossberg inwe echiche kacha mma nke ndagwurugwu Spree.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Berlin » Obodo kacha mma dị nso na Berlin